Ngaba ukhuseleko lweAkhawunti yam luye lwangeniswa kwiTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 387
Umsebenzisi we-Twitter unokujonga ukuba uKhuseleko lwakhe Iakhawunti ingenisiwe, xa ujonga oku kulandelayo: Uyabona iiTweets ezizenzekelayo ezithunyelwe yiAkhawunti yakho, uqaphela imiyalezo engacwangciswanga ethe ngqo ethunyelwe kwiAkhawunti yakho.
Umsebenzisi kubona imisebenzi yenziwe ngeAkhawunti yakho: Indlela yokulandela, ungalandeli, ibhloko, njl. Ufumana izaziso ezivela kuTwitter ezithi ukhuseleko lweAkhawunti yakho lunokungenziwa, kwaye ulwazi ngeAkhawunti yakho lutshintshile kwaye ayinguye olutshintshileyo.
Umsebenzisi uyaqonda ukuba ifayile yakhe Iphasiwedi ayisasebenzi kwaye, iqonga le-Twitter, likubuza ukuba ulibuyisele. Ngale ndlela, uMsebenzisi ufuna iinkqubo zeTwitter ukuzalisa iAkhawunti yakhe kwaye ayikhusele.
Amanyathelo okufumana uKhuseleko lweakhawunti yam yeTwitter
Amanyathelo ekufuneka elandelwe nguMsebenzisi we-Twitter Phinda Ufumane Ukhuseleko yeakhawunti yakho yeTwitter: Guqula iphasiwedi yakho kwangoko, cela ukuseta kwakhona iphasiwedi kwiqonga le-Twitter.
Umsebenzisi kufuneka aqinisekise ukuba ifayile yakhe idilesi ye-imeyile Qiniseka, unokuyitshintsha ukusuka kwi-Twitter ye-iOS okanye usetyenziso lwe-Android okanye ngokungena ku-twitter.com; ukuqhuba ngaphezulu koqhagamshelo losetyenziso lomntu wesithathu ongazi ngalo.
Ukongeza, uMsebenzisi kufuneka hlaziya iphasiwedi yakho kwizicelo zomntu wesithathu ozithembileyo; kuba iAkhawunti yakho ibonakalisiwe ekuthintelweni okwethutyana liqonga le-Twitter ngenxa yemizamo yokungena engaphumelelanga.
UKUNIKA INGXELO KUSETYENZISWA
Kwinethiwekhi yoluntu kukho amaxesha isimilo ezingaphandle kweMithetho kunye neMigaqo-nkqubo ye-Twitter, ethi icaphuke kwaye ichaphazele iincoko ezibonakalayo phakathi kweTwitter. Ezi zimo zengqondo azinyanzelekanga ukuba zibe ngamatyala oxhatshazo.
Ukuba uMsebenzisi we-Twitter ufumana iMiyalezo ngqo okanye Unxibelelwano olugqithisileyo IiAkhawunti eziGwenxa, unokwenza oku kulandelayo: Yeka ukulandela kwaye uphelise naluphi na uhlobo lonxibelelwano neAkhawunti ekubhekiswa kuyo; Ngale ndlela, iAkhawunti ithi iyakulahla inzala xa ingathathelwa ngqalelo kwaphela.
Ukuba isimo sengqondo se Iakhawunti Ephazamisayo iyaqhubeka, uMsebenzisi uyacetyiswa ukuba ayivimbe, ngaloo ndlela abathintele ekulandeleni, okanye ekuboneni umfanekiso wakho weProfayili kwiphepha lakho leProfayili okanye kumda wakho wexesha; Ngale ndlela, iimpendulo zakho okanye ukukhankanywa akuyi kuvela kwithebhu yezaziso zakho.
Ndifumana izoyikiso kwi-Twitter
Kwinethiwekhi yoluntu iTwitter yenzeka kancinci kuyo yonke into, kuba ziyahlangana zilunge kakhulu Ubungakanani babasebenzisi kwihlabathi liphela ngeendlela ezahlukeneyo zokuziphatha kunye nezenzo ezinokuchaphazela, ngokuqinisekileyo okanye ngokungalunganga, ukuba semngciphekweni kwabantu abathi bagqithise nge-Twitter.
Umsebenzisi, ukuba ufumene Iinkqubo lwalo naluphi na uhlobo kwaye ucinga ukuba ingqibelelo yakho yomzimba isemngciphekweni, kufuneka unxibelelane neSebe lamaPolisa; Kule meko: Bhala iMiyalezo eXhaphazayo okanye enogonyamelo oye wayifumana ngexesha lokuhlala kwakho kwinethiwekhi ye-Twitter.
Kubalulekile ukuba uMsebenzisi unikezelo yonke imeko enokubakho malunga nabarhanelwa abanokubonisa indlela yokuziphatha egqithileyo kwenye inethiwekhi yoluntu; ukubonelela ngolwazi olunxulumene nezisongelo zangaphambili ezifunyenweyo.
1 Amanyathelo okufumana uKhuseleko lweakhawunti yam yeTwitter
2 UKUNIKA INGXELO KUSETYENZISWA
3 Ndifumana izoyikiso kwi-Twitter